Jaaliyadda Puntland ee Columbus oo soo dhaweyn u samaysay wasiirka arrimaha gudaha (Sawirro)
K.news: Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magalada Columbus ayaa kulan soo dhawayn ah u sameeyay wasiirka arrimaha gudaha dowlada Puntland ee Soomaaliyeed mudane Cabdi Cilmi Cismaan (Karaash) oo maalmahan booqasho ku marayay dalka Maraykanka.
Isu imaatankani oo isugu jiray Xog waraysi iyo soo dhaweyn ayaa wax ka hadlay xubno ka tirsan Culumaa’udiin,Siyaasiyiin,iyo Odayaal dhaqameed, waxaana si aan kala har lahayn ay u muujiyeen sida ay ugu faraxsanyihiin in ay magalada Columbus ku soo dhaweeyaan Wasiirka oo lagu tilmaamay in uu wax fara badan ka qabtay Deegaanada Puntland.
Sheikh Muqtar Xassan oo ka mid ah Culimada magaalada Columbus oo ka hadlay Xaflada ayaa sheegay in ay wanaagsan tahay in soo dhaweyn iyo wada shaqaynba loo muujiyo qof kasta oo Mas,uul ah hadii uu ahaa lahaa mid Goboleed iyo Mid Dowlada dhexe ka socda intaba, laakiin waxaa uu carabka ku adkeeyay in jiritaanka Soomaalinimadu ay tahay arin muqadas ah islamarkaana ay wax walba ugu horeyso in arintaas uu qof kasta maskaxda ku hayo.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Ahmed Cilmi Cismaan (Axmed Karaash) oo war bixin dheer oo dhinacyo badan taabanaysa u jeediyay ka soo qeyb galayaasha kulanka waxaana uu Wasiirku sheegay in horu maro fara badan laga sameeyay deeganada Puntland laakiin ay arintu tahay Faanoole fari kama qodna oo uu ku micneeyay in wali ay taaganyihiin arimo u baahan in xal loo helo.
Waxaa uu ugu baaqay Jaaliyadaha dibada ee ka soo jeeda Puntland in looga fadhiyo laakin ta ay ku leeyihiin horumarinta Dalka asagoo tusaale ugu soo qaatay in ay jirto baahi loo qabo in la helo gaadiidka Gurmadka deg dega ee Caafimaadka iyo Bad Damisyada.
Ugu dambayntii waxaa uu uga mahad celiyay Jaaliyada magaalada Columbus sida wanaagsan ee ay usoo dhaweeyeen isagoo sheegay in uu u gudbin doono xukumadda uu Wasiirka ka yahay ee Puntland wixii talo iyo Tusaalooyin ah ee ay Jaaliyadu usoo gudbiyeen.